सामाजिक अभियान्ता उदय भाटको बिचारमा किसानको पिडा एक पटक पढौ। - Nepal's News Portal
किसानको ब्याथा लाई यसरी व्यक्त गरे सामाजिक अभियान्ता उदय भाटले।
जब देखि यो सभ्यता सुरु भयो तब देखि मानिसहरु खेती गर्दै आएका छ्न । खेतीबारी प्राचीनकाल देखि सुरु भएको हो । कसैलाई थाहा छ ? चामलको एक दाना तयार हुन कति समय लाग्छ ? थाहा छैन – १२० दिन- १२० दिन सम्म किसानको पसिना यो धानको खेतको माटोमा बुन -बुन मिल्छ तब गएर अन्न उत्पादन हुन्छ ।
यो पनि भनौं हाम्रो देशमा खाना बर्बाद हुदैन तर उहीँ देशका किसानको बर्बाद देखिन्छ भने किसानहरुले कहाँ जाने ? खाना खिलाउनेलाई भनिन्छ ।
!!अन्नदाता सुखी भव तु !!
अन्नदाता को हुन त ?
-खाना पकाउने वाला र खाना दिने वाला नभएर अन्न उब्जाउने वाला , यो खेती जस्तो उपहार इश्वरले हामिलाइ दिनु भएको छ ।
सेल्फोनको बिना हामी बाच्न सक्छौ र टिभी अथवा एसि बिना पनि बाच्न सक्छौ जो सेल्फोन, टिभी , एसि बनाउछ्न करोडपती छ्न । तर अन्न उब्जाउने वाला गरिब किसान यति कडा मेहनत र पसिना बगाउँदा पनि दिनका दिन गरिब हुँदै गहिरहेकाछ्न ।
प्याक्ट्री बनाउनु गलत होइन एक दम सहि हो तर खेतको बर्बाद गरेर प्याक्ट्टी बनाउनु गलत हो ।
यो देशमा कति जमिन सुख्खा छ्न किन कि त्यहाँ पानी छैन त्यसैले खेती गर्नमा धेरै जोखिम उठाउनु पर्छ। सोचेर जबाफ गरिनु त किसानले पनि ल्याउन कहाँ जाने ? पछिल्लो १० बर्ष पछि किसानहरुले आत्महत्या गरि रहेका छ्न । हरेक आधा घन्टामा एक किसान आत्महत्या गरिरहेका छ्न तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ ? तर सच्चाइ यही हो जहाँ मृत्यु सस्तो हुन्छ त्यो देख कहिले अगाडि बड्न सक्दैन ।
करिब १० लाख भन्दा ज्यादा किसान आफ्नो पेट पाल्नको लागी गाउँ छोडेर सहरमा मजदुरी गर्न गहि
रहेछ्न । जो हाम्रो देशको तागत ,हडि हो हुन उनिहरु बिल्डिङको चौकिदारी गर्न बिदेश जान्छ्न । जो किसान हाम्रो भगवान हुन जस्लाइ अन्नदाता भन्छौ उनिहरु नै मन्दिरमा भिख मागिरेहेका छ्न ।
एक कर्पोरेटमा काम गर्ने वाला हजारौं करोडको उधारो गरेर उ बसेर बिदेशी सराब पिइरहेको हुन्छ। तर मात्र ५ हजार १० हजार लिने वाला किसान बीस खाएर जमिनमा ज्यान दिई रहेका छ्न ।
यिनी कर्पोरेटको कालो धन्दाले गर्दा हाम्रो हरियाली जलिरहेका छ्न । खेतलाई सिचाइ गर्ने नदि प्याक्टी बाट आउने फोहोर पानी बाट जहर हुँदै गैरहेका छ्न ।
यिनी मल्टी नेसनल कम्पनीका मसिनले गर्दा हाम्रा खेतीजमिनमा कब्जा गरेर खतम गरिरहेका छ्न पुरै हेल्दी फुडमा मिसावट गरेर बर्बाद गरिरहेका छ्न। अन्डालाई सेम्पुमा , गाजरलाई गृममा , पाँच रुपैयाको अन्डालाई पन्ध्र रुपैयामा , दस रुपैयाको गाजर सय रुपैया खरिद गरि रहेको छ कर्पोरेटले तर यिनी मुल्यमा के गरिब किसान खरिद गर्न सक्छ । फेरि पनि त्यो पैसा किसान र गरिब कहिल्यै पुग्दैन । किन कि यो पैसा कर्पोरेट वाला लिन्छ र कर्पोरेट बिस्तारै -बिस्तारै झनै धनी बन्दै जान्छ । तर अन्न उब्जाउने किसान गरिब बाट झनै गरिब हुँदै जान्छन ।
पौस्टिक खाना नपाउनाले गरिब बच्चा, गरिब बुढाहरु बिरामी बाट मरि रहेकाछ्न । जागिर जस्तो भए पनि हाम्रो राम्रो लागि हुनु पर्छ तर हामी त्यी प्याक्टीको चाखरी गरेरआफ्नो जिन्दगी खबर गरिरहेकाछौ । याद राख्नुहोस खेती पनि एक उद्योग हो । किसानहरु उद्योगी हुन । किसानहरुको पहिचान गर्नु पर्छ ।